Safa saphel' isizwe yipoloni: Yintoni iListeriosis? Funda apha #Listeriosis - Vernac News
Safa saphel’ isizwe yipoloni: Yintoni iListeriosis? Funda apha #Listeriosis
March 5, 2018 April 30, 2020 Vernac News
Ekapa – UMphathiswa weZempilo uGqirha Aaron Motsoaledi ukhuphe isilumkiso izolo eyalela abantu ukuba bathi xha ukutya iintlobo ngeentlobo zenyama esiliweyo ezifana nepoloni, oonkqiyoyo (Russians), iiviena kunye nezinye ezingunobangela wentsholongwane egqugqisayo iListeriosis.
UMotsoaledi ubize inkomfa yoonondaba ngeCawa apho abhentsise khona intsusa yentsholongwane engubhubhane ebizwa ngokuba yiListeriosis. UMotsoaledi uxelele iintatheli ukuba imizi-mveliso yepoloni i-Enterprise Foods ePolokwane kunye neRainbow Chicken zizo ezingumthombo walentsholongwane. Kuvele ukuba uphando lwathi lwenziwa emva kokuba kwaye kwagula abantwana besikolo emva kokutya ukutya okunepoloni yakwa-Enterprise Foods.
Lentsholongwane sele isube imiphefumlo engaphaya ko 170 ukanti iNational Health Laboratory Services ithe zifikelele kwiwaka (1000) iziganeko zabantu abantu abachatshazelwe yile ntsholongwane. Inkampani echaphazelekayo, i-Enterprise Foods, iyalele ukuba zonke iivenkile zishenxise yonke imveliso echaphazelakayo ngelokuthintela ukunwenwa kwalentsholongwane.
Masifunde banzi ngalentsholongwane.
Ingaba yintoni isigulo iListeria?
Ilisteria okanye ilisteriosis sisigulo esibangelwa kukutya ukutya okutyhefwe yintsholongwane ebizwa ngokuba yi-Listeria monocytogenes. Intsholongwane yelistria ifumaneka endalweni (umz. emhlabeni) nakokunye ukutya okungenwe yile ntsholongwane. Nakuba singaxhaphakanga nje isigulo ilisteria sinazo iimpawu ezimbalwa, okanye zingabikho kwa ukubakho kubantu abasempilweni kodwa siyingozi. Nangona nje esisigulo sichaphazela wonke umntu, abona bantu basesichengeni ngoomama abakhulelweyo, abanswekwile (Diabetes), kunye nabanezifo ezibulala amajoni omzimba ezifana nogawulayo, umhlaza kunye nanabgula ngezintso. Ukuba uthe wanesigulo selisteria ngexesha ukhulelwe, ungasesichengeni esikhulu sokusuleleka nosana olungekazalwa. Ukusuleleka kosana olungekazalwa sisigulo selisteria kungakhokelela ekuphumeni kwesisu, ekuzalweni komntwana odiniweyo (ozelwe seswelekile), azalwe enobunzima obuphantsi okanye agule kakhulu umntwana esanda kuzalwa.
Isebe lezimpilo lithi awona maqela asesichangeni aquka iintsana ezinentsuku ezi-28 (37%) kunye nabo baneminyaka ephakathi ko-15 no49 (33%). La maqela omabini enza i70% yabantu abachaphazelekayo.
Zeziphi iimpawu zayo?
Isicaphu-caphu okanye ukucatshuzelelwa, umkhuhlane kunye notyatyazo.
Ukanti kuumabhinqa asakhulelweyo, isigulo iLesteria sidla ngokuba sisigulo igastro-intestinal kodwa esingezi ngamandla. Ukunyuka kwamaqondo obushushu omzimba ngaphambi nangasemva kokubeleka lolona phawu luye luqapheleke. Nangani kunjalo, lungachaphazeleka kakubi usana olungekazalwa nokuba asizanga ngamandla esi sigulo.
Ingaba isigulo iListeria singanyangeka?
Ewe, imeningitis ebangelwa kukusuleleka yiListeria inyangeka ngempumelelo ngamachiza e-antibiotics xa unyango olo luqalwe kwangoko. I-Gastro enteritis eyenziwa yiListeria ayinachiza ngaphandle kokulumkela ezi zinto zibangela iListeria.
UMphathiswa uMotsoaledi uyalele abantu ukuba bathi xha ekutyeni inyama ebandayo efana nepolony, oonkqiyoyo (Russians), kunye neVienna. Kubalulekile ukunciphisa amathuba okuba usuleleke sesi sigulo ngexesha lokukhulelwa. Ungakwenza oko ngokumana usitya ukutya okunempilo, uyikhethe into oyityayo nexesha otya ngalo, ulumkele nokutya ukutya okuthile okungakubeka emngciphekweni wokusulelwa yilisteria.
Ezinye iintlobo zokutya okumele kubalulekile ukukhetha izidlo ezondlayo kwizidlo ezahlukeneyo ezifana nemifuno, iziqhamo, izidlo zemveliso yobisi, isonka, iicerial, ipasta, inyama engenamanqatha, intlanzi, amaqanda neenqoba ( nuts). Nangani kunjalo, kufuneka utye ukutya okuphekiweyo okanye ukutya okutsha (fresh) kuphela.
Kubalukile ukungakutyi kutya ongaqinisekanga nokuba bekusenzelwa kwindawo ecoceke nenempilo kangakani na, kunye/ okanye bekugcinwe njani na.
Kulumkele ukutya izidlo ezingathi kanti zinelisteria ngexa . Izidlo ezinjalo zezi zikhenkcezisiweyo, izidlo esezilungele ukutyiwa
kuqukwa kuzo nezi:
isonka samasi (itshizi) ethambileyo njenge-feta, i-bic, ne-camembert
inyam’enkukhu eyi-takeaway esikwe yazizicwibi (njengelungiselwe ukufakwa kwisendiwitshi)
inyama ebandayo (njengefakwa esonkeni)
ii-Pâté (Ingxubevange yenyama ebandayo esiliweyo)
iisaladi esele zenziwe okanye ebezigcinwe
ukutya okuyimveliso yolwandle okungaphekwanga (njengembaza neshashimi)
ukutya okuyimveliso yolwandle okuphekwe ngomphunga njenge-smoked salmon, smoked oysters)
BREAKING NEWS: Professor Mamokgethi Phakeng tipped to be next UCT Vice Chancellor
Final year CPUT student dies after hit & run | Utshayiswe yimoto wasweleka umfundi wase-CPUT